औषधि पसल - आई खोज
छाला - हाम्रो संवेदनशील संवेदी अंग
छाला हाम्रो सबैभन्दा ठूलो इन्द्रिय अंग हो।2वर्ग मिटरसम्म मानव शरीर फैलन्छ र हाम्रो शरीरको वजनको 14 किलो बनाउँछ। एक राम्रो पोशाक छाला आकर्षण को लागी मात्र महत्त्वपूर्ण छैन। राम्रो छाला हेरचाह पनि राम्रो स्वास्थ्य लाई कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ। किनभने केवल अतुलनीय एसिड मन्टलले हानिकारक कीटाणुहरूको लागि प्रभावकारी बाधा बनाउँछ। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो अ How्ग कत्तिको संवेदनशील भई बाहिर छ भनेर आफैलाई देख्न सक्ने बनाउँदछ: डरले गूजबम्स रिलीज गर्दछ, लाजले हामीलाई लाजमा पार्छ र डरले निधारमा पसिना बगाउँछ। त्यसकारण, सन्तुलित साइक सुन्दर रंगको लागि महत्त्वपूर्ण छ। नियमित आराम अवधि र खेलहरूले भित्री सन्तुलनमा र यसरी देखा पर्दछमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। तर बाह्य कारकहरूले छालाका लागि समस्याहरू निम्त्याउँदैछन्। चिसो वा सुख्खा हावाले उनलाई अत्यधिक घामको रूपमा क्षति पुर्‍याउँछ। धेरै आक्रामक सफाई एजेन्टहरूले एसिड मन्टललाई हमला गर्छन्। छालाको PH स्तर कायम गर्न उचित छाला हेरचाह महत्वपूर्ण छ। तपाईको आवश्यकता अनुसार छाला कायम राख्न तपाईले पहिला आफ्नो छालाको प्रकार निर्धारण गर्नु पर्छ। त्यहाँ चार प्रकारका छाला प्रकारहरू छन्:
संयोजन छाला सामान्य र तेल छाला क्षेत्रहरूको एक साथ घटना द्वारा विशेषता हो। अशुद्ध, भद्दा छिद्रपूर्ण र तेल छाला क्षेत्र मुख्यतया टी-जोनमा देखा पर्दछ, जस्तै निधार, भौहें, नाक र चिनको बीचमा। गाल क्षेत्र को छाला, तथापि, सुख्खा र तनावपूर्ण छ।
एक चम्किलो, ठूलो-छेउमा, पिम्पल्स र ब्ल्याकहेडस् छालाको खतरा चिल्लो छाला प्रकारको विशेषता हो। अशुद्धीहरू सेबेशियस ग्रन्थीहरूको अत्यधिक उत्पादनका कारण हुन्छन्, जुन प्रायः हार्मोनल हुन्छ। तेल छाला प्राय: यौवनमा फेला पर्दछ।
संवेदनशील छाला लालिमा, तनाव र एलर्जी प्रतिक्रियामा जान्छ। छाला नाजुक, राम्रो पोड र वातावरणीय प्रभाव र तनावको लागि धेरै संवेदनशील छ। सुख्खा छाला कोषहरू असामान्य छैनन्।
सामान्य छालाको प्रकारको तुलनात्मक रूपमा राम्रो pores हुन्। सेबेशियस ग्रन्थीहरूको उत्पादन सन्तुलित भएकोले छालाको सन्तुलन ठीक छ र रंग सुस्त देखिन्छ।
कुन additives तपाईंले ध्यान दिनु पर्छ?
सकेसम्म लामो छालाको युवा उपस्थिति कायम गर्न, उचित हेरचाह महत्त्वपूर्ण छ। गहन हेरचाह उपचारको तयारीको लागि छालाको पिलिing छ जसले मृत छाला कोषहरूलाई हटाउँदछ। छालाको प्रकारमा निर्भर गर्दै, बिभिन्न हेरचाह उत्पादनहरू अब उपलब्ध छन्। यी जीवाणुरोधी गुणहरू, मॉइश्चराइजिंग वा सुखदायक एजेन्टहरूका साथ उत्पादहरू हुन सक्छन्। तर तपाइँ केवल एक उत्पादन छनौट गर्दा प्रमाणित हेरचाह गुणहरु मा मात्र ध्यान दिनु हुँदैन, तर विशेष मा केहि additives को छूट को खरीद निर्णय प्रभावित गर्नु पर्छ! उदाहरण को लागी, कस्मेटिक उत्पादनहरु जसले पराबन्स समावेश गर्दछ स्तन र अण्डकोषको क्यान्सरलाई बढावा दिँदै, गर्भवती महिलाहरुमा भ्रुणको कुरूपता निम्त्याउँछन् र बच्चाहरुमा प्रारम्भिक यौवन शुरू गर्दछन्। जे होस् उत्पादकहरूले केही सीमाहरूको पालना गर्न बाध्य छन्, यी हार्मोनली अभिनय रसायनहरूको स्तर द्रुत गतिमा महत्वपूर्ण मूल्यमा बढ्न सक्छ किनभने अन्य दैनिक उत्पादनहरू जस्तै प्लास्टिकको बोतल, केबलहरू, इत्यादिमा उनीहरूको उपस्थितिको कारण। कम्तिमा बच्चाहरूको उत्पादनहरूमा पराबेन्ससँग कुनै व्यवसाय हुनुहुँदैन। सिलिकन्स र प्याराफिनहरू जस्ता सामग्रीहरू पनि हटाउनु पर्दछ। तिनीहरू अंगहरूमा जम्मा गर्न सक्छन् र क्यान्सर निम्त्याउन सक्छन्। प्रमाणित प्राकृतिक सौन्दर्य प्रसाधनहरू एक वैकल्पिक हुन सक्छ किनभने तिनीहरू हार्मोनल प्याराबेन्स, सिलिकोन र प्याराफिनहरू बिना गर्छन्। यद्यपि एलर्जीनिक सुगन्धहरू पनि यसमा समावेश गर्न सकिन्छ।
जब उनी औषधि पसल लेखहरू छनौट गर्छन्, त्यसरी ठ्याक्कै तुलना गर्न र सामग्रीहरूमा ध्यान दिन उचित छ। किनभने स्वास्थ्य अझै राम्रो देखिको लागि उत्तम अवस्था हो!
तपाईंको शयन कक्षमा फर्किने कामुक पछाडि ल्याउनुहोस्!
सेक्स सम्बन्धको गुणस्तरमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तथापि, रोजगारीको जीवन प्रायः हामीलाई चुनौती दिन्छन् कि अंतरिमता तरिकाले पछ्याउँछ। र उनी एक खुशीको साझेदारीको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। जडान एक जना घनिष्ठ अर्थमा लागि जिम्मेवार छ कि हर्मोन - cuddling र सेक्स, हाम्रो मस्तिष्क ओक्सीटसिन उत्पादन गर्छ। तर विशेष गरी लामो सम्बन्धमा वा जब युवती परिवार बन्यो भने, निविदा घण्टाको संख्या प्रायः कम हुन्छ। छुट्याउनु नराम्रो हुन्छ, र नयाँ पारिवारिक जिम्मेवारीहरूको कारणले गर्दा निर्दोष समय र सेक्सको लागि बायाँ चाहिएको छ। यस अवस्थाले सम्बन्धको लागि तल सर्पिल गतिमा सेट गर्न सक्छ। यसको बारे केहि गर्न को लागि उच्च समय! तर असल मनसाय मात्र प्रायः पर्याप्त हुँदैनन्। यो दैनिक रोजगारीको आवश्यक आवश्यक पिई दिन गाह्रो छैन र शरद ऋतुमा कामुक पछाडि ल्याउन गाह्रो छैन। उदाहरणका लागि, सेक्सी खेलाडीहरू, एफ्रोडियसिअसहरू वा सेक्सी अधोवस्त्रमा।
प्रत्येक स्वादको लागि खिलौने
सबैभन्दा राम्रो "पचास ओठका काँध" बेचेकाले वास्तवमा सेक्सको खेलकुद बजार बढायो। यौन अनुभवहीन विद्यार्थी Anastasia स्टील र जवान करोडपति र charismatic sadist मसीही ग्रे, दासत्वबाट खेल चासो को कामुक रोमांचक द्वारा Fanned, हैकम र sadomasochism अप्रत्याशित अनुपात कल्पित। विशेष गरी छाला ताली, blindfolds र बंधन लागि मांग पुस्तकको प्रकाशन पछि एकदम वृद्धि भएको छ। तर सबैलाई दुखाइको लागि पीडा वा यौनको लागि इच्छाको बारेमा उत्साहजनक हुन सक्दैन। केही प्रतिज्ञाहरु को लागी सेक्सी अधोवस्त्र टिंगलिंग कामुकता पहनते हो। जोनहरू र लेसहरूमा वांछनीय महसुस गर्ने व्यक्तिले यो सेक्सी आत्म-विश्वासलाई विकृत गर्दछ। अझै पनि अरू उत्सुक छन् तर बल्ल उत्तेजित उत्तेजनाहरु को विचार संग असहज हो। त्यसपछि कामुक को दुनिया पहिलो प्रयोगात्मक सम्पर्क उदाहरणका लागि, लागि, स्वाद शरीर पाउडर, पंख नाजुक पतिस्थिति वा मालिश मोमबत्ती छन्।
सेक्सी मितिहरू बढी जुनूनमा
केवल दुईको लागि एक कामुक साँझको योजना बनाउनुहोस् र बिस्तारै कामुक रुचिका छनौटहरू मार्फत जुन तपाईं रुचि राख्नुहुन्छ छनौट गर्नुहोस्। सम्भवतः एक कामुक चलचित्रले तपाईंको जुनून चकित गर्नेछ र सेक्सी मितिको मिति तपाईंको पात्रोको अभिन्न भाग हुनेछ। वा आफैलाई आफैँलाई होटलमा एक अज्ञात सप्ताहांतको व्यवहार गर्नुहोस् र तपाईंको लुगालाई हट लुगा लगाउने र एक अंतरजातीय मसाजसँग मिलाउनुहोस्। तपाईंको कल्पना जंगली चल्यो - र आफ्नो गुप्त इच्छाहरूको बारेमा कुरा गर्न हिम्मत! साथसाथै, नयाँ स्थानहरू वा हँसिलो ठाउँहरू अन्वेषण गर्नाले प्रत्येक सम्बन्धमा निश्चित ताजा हावा ल्याउँछ!
तपाईं रुचि जे: एकल प्रदर्शन, aphrodisiacs, अधोवस्त्र वा भोक लागि अश्लील लागि Vibrators प्राप्त गर्ने या नगर्ने, यौन लागि लेटेक्स, दासत्वबाट वा मालिश तेल - छ केहि जान्छ! हाम्रो गाइडमा हेर्नुहोस् र सेक्सी लेखहरूका लागि हाम्रो सुझावहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
अनगिन्ती जर्मनहरूले दिनभरि धेरै कप कफी पिउँछन्: यसको पिसाब यसको अनियमित स्वादको कारण गरम पेय सबैभन्दा लोकप्रिय पेय हो। कहाँ ...
खुशी isearch - जुलाई 31, 2017 0
व्यवसायिक जस्तो स्वादिष्ट रोटी सबैलाई ताजा खान मन पर्छ, प्राथमिकता तातो पकाएको सामान पनि। सबैभन्दा पहिले र रोटी नै हो। यो खडा हुँदैन ...
स्वास्थ्य isearch - अगस्ट 14, 2017 0
महिलाको शेभरको साथ, छाला राम्रोसँग नरम र चिल्लो हुन्छ अन्तमा, त्यहाँ यस्ता आविष्कारित महिला रेजरहरू छन् जसले शरीरको कपाल छिटो, प्रभावकारिता र हल्का रूपमा हटाउँदछन्। पनि धेरै ...
स्वास्थ्य isearch - अगस्ट 11, 2017 0
सम्पर्क लेंस चश्माको अघोषित संस्करण हुन्। कसैले पनि एउटा भिजुअल सहायता आवश्यक छ भनेर देख्न सक्दैन र त्रासदी फ्रेमले अनुहारलाई रोक्दैन। अधिक र अधिक व्यक्ति ...
अधिकांश भन्दा प्रिय साथीहरू साथीभाइमा आफ्ना मालिकहरूसँग हुनुपर्दछ। भागमा, एक भट्टि भ्रमण अपरिहार्य छ। कुकुरलाई हस्तान्तरण गर्नुको कारण कुन कारणको लागि, एक कुकुर बक्सको प्रयोग धेरै सल्लाहकार छ। निजी कारहरूमा, यो कुत्त र चालकहरूको सुरक्षा कार्य गर्दछ। लागि ...
बिरालाका साथै कुकुरहरू जर्मन सबैभन्दा लोकप्रिय घरपालुवा जनावरहरू हुन्। अवश्य पनि, त्यसपछि एउटा कुकुर केनेल पनि छ, ताकि प्रिय चार-खुट्टे मित्रहरूले राम्रो महसुस गर्न सक्दछन्। जहाँसम्म कुकुरलाई राम्रो लाग्न सक्छ। डोघहाउस र सहि ...
isearch - जुलाई 27, 2017
एक खरगोश हच प्रजनन को लागी खरीद गर्न सकिन्छ, तर पशु प्रेमीहरूको लागि पनि। खरगोश हचमा मागहरू फरक फरक छन्। तर प्राथमिकतालाई प्रजाति उपयुक्त दृष्टिकोणमा दिइनेछ। हार्डवेयर स्टोरमा र अनलाईनमा पसलहरूमा हसनस्लेले फ्रीभाइलिङ बार्सिलोना र लक्जरी मोडेल प्रदान गर्न सजिलो सरल छ ....
isearch - जुलाई 21, 2017
कुकुरको ओछ्यान - आरामदायी, व्यक्तिगत र सुन्दर कुकुरले आफ्नो समयको निद्रामा बढी खर्च गर्दछ। त्यसोभए यसका लागि उसको मनपर्ने स्थान सोफा वा मास्टर र मालकिनको ओछ्यान होइन, ऊ आफ्नो आरामदायी सुत्ने ठाउँ सेट अप गर्नुपर्दछ। ऊ त्यहाँ फिर्ता लिन सक्छ र एक पटक ...
isearch - जुलाई 19, 2017
बिरालाको फरको हेरचाहले बिरालोको स्वास्थ्यलाई जोगाउँदछ पोशाक स्याहार बिरालोको हेरचाहको एक प्राथमिक भाग हो। छाला र कपाल स्वस्थ राख्न, प्रत्येक बिरालाको कोट नियमित अन्तरालमा हेरचाह गरिनु पर्छ। घनत्व र लम्बाइमा निर्भर गर्दै, तथापि, आवश्यक हेरचाहको तीव्रता धेरै फरक हुन सक्छ।
पोषण पूरक isearch - जुलाई 11, 2017 0